Airbus A319 जेट airliner आंतरिक निजी जेट चार्टर उडान सेवा व्यापार वा अन्तिम मिनेट किफायती व्यक्तिगत विमान उड्डयन विमान भाडा मेरो नजिकै आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो अर्को यात्रा मध्य-आकार deadhead पायलट खाली खुट्टा उद्धरण मा गन्तव्य लागि कम्पनी को लागि.
को Airbus ACJ319 एयरोस्पेस निजी जेट चार्टर व्यवसाय वर्ग विमान छ. यसको डिजाइन को A320 व्यावसायिक airliners आधारित छ. विमान मा भएको थियो 1997 र मूल A319 भन्दा अतिरिक्त इन्धन ट्यांकी विशेषताहरु. यो विमान को अब दूरी यात्रा गर्न सक्छन् हो 6000 एनएम वा 6,905 माइल. यो सामान्यतया व्यावसायिक वर्ग सुविधाहरू यसको प्रभावशाली दायरामा चार्टर कम्पनीहरु र ठूलो निगमों धन्यवाद द्वारा संचालित छ.
को को भित्री ACJ319 विशाल र अति-आधुनिक छ, यसरी व्यापार यात्राहरूमा विशिष्ट परिवहन लागि यो आदर्श बनाउने. विमान धेरै खण्डहरू आउँछ, जो Ensuite बाथरूम संग मास्टर बेडरूम मा आराम गर्न यात्रुहरू सक्षम, चलचित्र लाउंज क्षेत्र मा हेर्न, सभाहरू सञ्चालन वा भोजन क्षेत्रमा खाद्य आनन्द. यो सबै भन्दा ठूलो सानो घर आफ्नो वर्ग मा क्रस-खण्ड दावा र अनुपम लक्जरी प्रदान. यो चार्टर विमान राज्य-को-को-कला सुविधाहरू एक साधारण ककपिट प्रदान गर्दछ.
को आंतरिक विशिष्ट सानो घर आवश्यकताहरु अनुरूप पूर्णतया अनुकूलन छन्. यो एक sizable कर्मचारी क्षेत्र उड-द्वारा-तार नियन्त्रण छ र रोजगार.
subregion द्वारा AIRBUS हवाइजहाज A319 ब्याज
को Airbus ACJ319 जेट विमान समीक्षा
यो Airbus ACJ319 को acj परिवार मा सबै भन्दा लोकप्रिय विमान मध्ये एक छ कि कुनै आश्चर्य रूपमा आउँछ. यो दायरा एक आदर्श संयोजन प्रदान गर्दछ, लक्जरी र एक विशाल सानो घर. यो अभ्क तेल हाल्नु गर्न आवश्यकता बिना दुबई वा लन्डन लस भेगास देखि दक्षिण अफ्रीका मा केप टाउन देखि यात्रा गर्न सक्छन्. यो दुनिया को विभिन्न भागहरु मा व्यापार यात्राहरूमा embarking अधिकारी धेरै-आवश्यक लचीलापन प्रदान गर्दछ.
विमान व्यस्त व्यापारिक लागि एक शानदार र राम्रो-अयोग्य उडान कार्यालय प्रतिनिधित्व. यो ठूलो निगमों र राज्य को टाउको को उच्च-प्रोफाइल स्थिति र प्रतिष्ठा befits महत्वपूर्ण व्यापार उपकरण हो.
विमान सम्म समायोजित गर्न सक्छन् 50 यात्रु. यो पनि संचालक को आवश्यकता मेल गर्न थप कन्फिगरेसन विकल्प प्रदान गर्दछ. को ACJ319 उच्च उँचाइमा छिटो उड गर्न क्षमता छ, यसरी उडान समय कम.
Airbus A319 जेट airliner विलासिता आंतरिक निजी जेट चार्टर उडान सेवा #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury # AirbusA319Jetairliner # airbusa319 # airbusa319seating # airbusindustriea319 # a319airbus #Luxuries #lifestyle #travel
द्वारा साझा एक पोस्ट WysLuxury JetCharter (@wysluxury) मा अक्टोबर 11, 2017 मा 8:09हूँ पीडीटी